Oge a ga-anọchibido Jeruselem eruwela (1-9)
Jehova ga-eweso Jeruselem iwe (10-21)
Ndị mmadụ na-asị, “Udo dị!” mgbe udo na-adịghị (14)
Ndị obi tara mmiri si n’ebe ugwu na-abịa ịlụso Zayọn agha (22-26)
Jeremaya ga-adị ka onye na-anụcha ọla (27-30)
6 Ụmụ Benjamin, sinụ na Jeruselem gbapụ ka ihe ọ bụla ghara ime unu. Fụọkwanụ opi+ na Tekoa.+ Mụnyenụ ọkụ na Bet-hakirem ka ọ bụrụ ihe ga-agba àmà,N’ihi na ọdachi si n’ebe ugwu na-abịa. Ọ ga-abụ nnukwu ọdachi.+ 2 Zayọn* yiri nwaanyị mara mma nke a zụtọrọ azụtọ.+ 3 Ndị ọzụzụ atụrụ na ìgwè atụrụ ha ga-abịa. Ha ga-ama ụlọikwuu ha gburugburu ya.+ Atụrụ onye nke ọ bụla n’ime ha na-ata ahịhịa dị n’ebe onye na-azụ ya nọ.+ 4 “Jikerenụ* ịlụso ya agha. Bilienụ ka anyị lụso ya agha n’etiti ehihie.” “Anyị efuola, n’ihi na chi ejiwela. Chi na-ejikwu n’ike n’ike.”* 5 “Bilienụ ka anyị lụso ya agha n’abalịMa kụrie ụlọ elu ya niile a rụsiri ike.”+ 6 N’ihi na Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, sị: “Gbutuonụ osisi dị iche iche, jirikwanụ ájá rụọ mgbidi gburugburu mgbidi Jeruselem iji lụso ya agha.+ Ọ bụ obodo nke ga-azarịrị ajụjụ ihe o metara. Naanị ihe a na-eme n’ime ya bụ imegbu ndị mmadụ.+ 7 Otú ahụ e si ahụ mmiri jụrụ oyi n’olulu mmiri,Ka e si ahụ ihe ọjọọ na Jeruselem. A na-anụ mkpọtụ ndị tigbuo zọgbuo na mkpọtụ ndị na-ebibisị ihe n’ime ya.+ M na-ahụ ọrịa na ọdachi mgbe niile. 8 Jeruselem, nabata aka ná ntị m na-adọ gị, ma ọ́ bụghị ya, m* ga-agbakụta gị azụ ka ihe a na-asọ oyi.+ M ga-eme ka ị tọgbọrọ nkịtị, a gharakwa inwe mmadụ ọ bụla ga-ebi na gị.”+ 9 Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, sị: “Ndị iro ga-akpụrụ ndị Izrel fọdụrụ, ka à ga-asị na ha bụ mkpụrụ vaịn ndị ikpeazụ a na-atụtụkọrọ. Ndị iro ha ga-akpụrụ ha niile laa, otú ahụ onye na-aghọ mkpụrụ vaịn ndị dị n’alaka osisi vaịn si ekpokọrọ ha niile.” 10 “Ole ndị ka m ga-agwa okwu, dọọkwa aka ná ntị? Ònye ga-ege m ntị? Ntị ha akpọchiela.* Ọ bụ ya mere na ha enweghị ike ịṅa ntị.+ Ha ji okwu Jehova eme ihe ọchị.+ Okwu ya anaghị atọ ha ụtọ. 11 Iwe juru m obi otú o juru Jehova. Ike agwụkwala m ịgbachi nkịtị.”+ “Gwa nwatakịrị nọ n’okporo ámá na ezigbo iwe ji m.+ Gwakwa ya ụmụ okorobịa ndị gbakọrọ otu ebe. A ga-ejide ha niile, ma nwoke ma nwunye ya,Ma onye mere agadi ma onye kara ezigbo nká.+ 12 A ga-enyefe ndị ọzọ ụlọ ha,Ubi ha, na ndị nwunye ha.+ M ga-amatị aka mee ndị bi n’ala a ihe.” Ọ bụ Jehova kwuru ihe a. 13 “Onye ọ bụla n’ime ha, malite n’onye kacha nta n’ime ha ruo n’onye kacha ukwuu, na-eji aghụghọ achọ ihe ga-abara naanị ya uru.+ Onye ọ bụla n’ime ha na-egwu wayo, ma onye amụma ma onye nchụàjà.+ 14 Ha na-achọ ịgba ndị m ọkpụkpụ, ma ha ejighị ya kpọrọ ihe. Ha na-asị,‘Udo dị! Udo dị!’ Mgbe udo na-adịghị.+ 15 Ihere ọ̀ na-eme ha na ọ bụ arụ ka ha mere? Ihere anaghị eme ha ma otu. Ha amaghịdị ihe bụ́ ihere ime mmadụ.+ N’ihi ya, ha ga-eso ndị dara ada daa. Ha ga-ada mgbe m ga-ata ha ahụhụ.” Ọ bụ Jehova kwuru ihe a. 16 Jehova kwukwara, sị: “Guzoronụ ebe ụzọ gbara mkpị lee anya,Jụọnụ ajụjụ okporo ụzọ ndị dịwara kemgbe oge ochie. Jụọnụ ebe ezigbo ụzọ dị. Jeekwanụ ije na ya+Ka ahụ́ ruo unu* ala.” Ma unu na-asị: “Anyị agaghị eje ije na ya.”+ 17 “Ahọpụtara m ndị nche+ ndị nọ na-asị unu,‘Ṅaanụ ntị n’ụda opi!’”+ Ma unu nọ na-asị: “Anyị agaghị aṅa ntị.”+ 18 “N’ihi ya, mba dị iche iche, nụrụnụ. Ununwa ndị gbakọrọnụ, marakwanụIhe ga-eme ndị bi na Jeruselem. 19 Ndị bi n’ụwa, geenụ ntị! M na-eme ka ọdachi dakwasị ndị a+N’ihi echiche ọjọọ ha na-eche. Ha aṅaghị ntị n’okwu m. Ha anabataghịkwa iwu m.”* 20 “Olee nke gbasara m na unu na-eweta frankinsens si Shiba,Na-ewetakwa okpete na-esi ísì ọma nke si n’obodo dị anya? Àjà a na-esucha ọkụ unu na-achụ adịghị mụ mma,Àjà ndị ọzọ unu na-achụ adịghịkwa mụ mma.”+ 21 N’ihi ihe a, Jehova kwuru, sị: “M na-edowere ndị a ihe ga-eme ka ha daa. Ọ ga-akwadakwa ha,Ma ndị nna ma ụmụ ha,Mmadụ na ibe ya. Ha niile ga-ala n’iyi.”+ 22 Jehova kwuru, sị: “E nwere ndị si n’ala dị n’ebe ugwu na-abịa. E nwekwara nnukwu mba a ga-esi n’ime ime ụwa kpọtee.+ 23 Ha ga-eji ụta na árọ̀ abịa. Obi tara ha mmiri. Ha agaghịkwa eme ebere. Ha ga-ebigbọ ka oké osimiri. Ha ga-agbarakwa ịnyịnya bịa.+ Ha na-ahazi onwe ha n’usoro ịlụso Zayọn* agha ka à ga-asị na ha bụ otu onye.” 24 Anyị anụla akụkọ gbasara ya. Ike agwụla anyị.+ Anyị nọ n’ezigbo ahụhụ. Ahụ́ na-egbu anyị mgbu ka nwaanyị na-amụ nwa.+ 25 Abanyela n’ọhịa,Agakwala n’ụzọ,N’ihi na onye iro ji mma agha. Ụjọ jikwa ndị mmadụ n’ebe niile. 26 Ndị m, yirinụ ákwà iru uju.+ Tụrụọkwanụ onwe unu ná ntụ. Ruonụ ụdị uju a na-eru ma nwa a mụrụ naanị ya nwụọ. Na-etikwanụ mkpu ka ndị obi gbawara,+N’ihi na e nwere onye ga-abịa na mberede bibie anyị.+ 27 “Ahọpụtala m gị* ka ị dị ka onye na-anụcha ọla, n’ihi na ị ga-anụcha ndị m. Ị ga-eleru ha anya,Chọpụta nnọọ ihe ha na-eme. 28 Ha niile dị isi ike karịa mmadụ niile.+ Ha na-agagharị na-ekwutọsị ibe ha.+ Ha dị ka ọla kọpa na ígwè. Ha niile emebiela. 29 Mmadụ ejirila ihe e ji afụnwu ọkụ fụnwuo ọkụ ka ọ nụchaa ọla. Ka ọ nọ na-afụnwu ya, ihe ahụ o ji afụnwu ọkụ eree ọkụ. Mbọ niile ọ gbara alaa n’iyi.+ Naanị nkume led ka o nwetara n’ọkụ ahụ. E kewabeghị ndị ọjọọ ka ha nọrọ iche n’ebe ndị ọzọ nọ.+ 30 Ndị mmadụ ga na-akpọ ha ọlaọcha a jụrụ ajụ,N’ihi na Jehova ajụla ha.”+
^ Ma ọ bụ “Doonụ onwe unu nsọ maka.”
^ Na Hibru, “Onyinyo mgbede na-adịkwu ogologo.”
^ Na Hibru, “E bighị ntị ha úgwù.”
^ Ma ọ bụ “ntụziaka m.”
^ Ya bụ, Jeremaya.